ỊGBANWE USORO SI SSD KA SSD - SSD - 2019
HP Multifunction LaserJet 3055 chọrọ ọkwọ ụgbọala dakọtara ka ha rụọ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ. Enwere ike ime ha nhazi n'ime ụzọ ise. Onye ọ bụla nhọrọ dị iche na algorithm nke omume na adabara n'ọnọdụ dị iche iche. Ka anyị lelee ha niile ka anyị wee nwee ike ikpebi ihe kachasị mma na ịga n'ihu na ntụziaka ahụ.
Ụzọ niile dị n'isiokwu a nwere irè dị irè na mgbagwoju anya. Anyị gbalịrị ịhọrọ usoro kachasị mma. Nke mbụ, anyị na-enyocha ihe kachasị dị irè ma mechaa ka ọ dịkarịa ala achọrọ.
Usoro nke 1: Onye Mmepụta Onye Ọrụ Nhazi
HP bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu maka mmepụta nke laptọọpụ na iche iche dị iche iche. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ụlọ ọrụ dị otú ahụ kwesịrị inwe ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ebe ndị ọrụ nwere ike ịchọta ozi niile dị mkpa banyere ngwaahịa. N'okwu a, anyị nwere mmasị na ngalaba nkwado, ebe enwere njikọ iji budata ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ. Ịkwesịrị ime usoro ndị a:
Gaa na nkwado ọrụ HP
Meghee ebe obibi HP ebe ị na-agafe "Nkwado" ma họrọ "Software na ndị ọkwọ ụgbọala".
Ọzọ, ị ga-ekpebi ngwaahịa ahụ ka ị gaa n'ihu. N'ọnọdụ anyị, a na-egosi ya "Onye nbipute".
Tinye aha ngwaahịa gị na akara pụrụ iche na ịnyagharịa na nsonaazụ ọchụchọ kwesịrị ekwesị.
Jide n'aka na e kpebiri na nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, dozie nke a n'onwe gị.
Gbasaa ngalaba "Driver-Universal Print Driver"iji nweta nbudata njikọ.
Họrọ nsụgharị ọhụrụ ma ọ bụ nke nwere ike, wee pịa "Download".
Chere ruo mgbe ibudata zuru ezu ma mepee installer ahụ.
Wepụ ọdịnaya ahụ na ebe ọ bụla dị na PC.
Na ọkachamara nwụnye nke meghere, kwenye nkwekọrịta ikike ma gaa n'ihu.
Họrọ ọnọdụ nwụnye nke ị weere na ọ kachasị mma.
Soro ntuziaka na installer ma chere ka usoro ahụ mezue.
Usoro 2: Akaụntụ Nkwado Enyemaka
Dịka e kwuru n'elu, HP bụ nnukwu ndị na-arụpụta ngwá ọrụ dị iche iche. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ngwaahịa, ndị mmepe emepụtawo ọrụ enyemaka inyeaka. Ọ na-achọpụta na ịnweta mmelite ngwanrọ, gụnyere ndị na-ebi akwụkwọ na MFPs. Ntinye nke uru na ọchụchọ maka onye ọkwọ ụgbọala bụ:
Meghee ebe ibudata nke uru ịba uru na pịa bọtịnụ a kapịrị ọnụ iji chekwaa installer.
Gbaa installer ma gaa n'ihu.
Jiri nlezianya gụọ okwu nke nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ, ma nabata ha, wepụsị ihe kwesịrị ekwesị.
Mgbe echichi ahụ gasịchara, Onye Nlekọta Caliper ga-amalite na akpaghị aka. N'ime ya, ịnwere ike ịga ozugbo na nyocha software site na ịpị "Lelee maka mmelite na posts".
Chere maka iṅomi ma budata faịlụ iji mezue.
Na MFP ngalaba, gaa "Mmelite".
Họrọ components ịchọrọ ịwụnye wee pịa "Download na Wụnye".
Ugbu a ị nwere ike ịmalite elu ma ọ bụ mechie ọrụ ahụ, ihe ndị ahụ dị njikere maka ibipụta.
Usoro 3: Ahịa Software
Ọtụtụ ndị ọrụ maara na enwere mmemme pụrụ iche nke ọrụ kachasị na-elekwasị anya na PC ndị nyocha na ịchọta faịlụ na ngwaike jikọtara na ejikọrọ. Ọtụtụ n'ime ndị nnọchianya nke software dị otú ahụ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na MFP. Ị nwere ike ịchọta ndepụta ha na isiokwu ọzọ anyị na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Anyị na-akwado iji DriverPack Solution ma ọ bụ DriverMax. N'okpuru ebe a nwere njikọ dị na ntuziaka, nke na-akọwa n'ụzọ zuru ezu usoro ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ dị iche iche na mmemme ndị a.
Chọọ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na usoro ihe omume DriverMax
Nzọụkwụ 4: Ntọala Ngwaọrụ Multifunctional
Ọ bụrụ na ị jikọọ HP LaserJet 3055 na kọmputa wee gaa "Onye njikwa ngwaọrụ", n'ebe ahụ ị ga-ahụ ID nke MFP a. Ọ bụ ihe pụrụ iche ma na-eje ozi maka mmekọrịta ziri ezi na os. ID nwere ụdị ndị a:
USBPRINT na Hewlett-PackardHP_LaAD1E
N'ihi koodu a, ị nwere ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị site na ọrụ ịntanetị pụrụ iche. Enwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu banyere isiokwu a.
Usoro 5: Ngwá Ọrụ Windows
Anyị kpebiri ịkọwa usoro a n'ikpeazụ, ebe ọ bụ na ọ ga-adị irè naanị ma ọ bụrụ na OS anaghị achọpụta ya. Ikwesiri site na ngwa Windows uzo iji mee usoro ndi a iji tinye akụrụngwa:
Site na menu "Malite" ma ọ bụ "Ogwe njikwa" gaa "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ".
Na n'elu panel, pịa na "Wụnye Mbipụta".
HP LaserJet 3055 bụ onye nbipute mpaghara.
Jiri ọdụ ụgbọ mmiri dị ugbu a ma ọ bụ gbakwunye ọhụrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'ime listi nke gosipụtara, họrọ onye na-emepụta na ihe nlereanya, wee pịa "Na-esote".
Tọọ aha ngwaọrụ ma ọ bụ hapụ ụdọ ahụ agbanweghi agbanwe.
Chere ka usoro a mezue.
Kekọrịta onye nbipute ma ọ bụ hapụ ebe dị nso na isi "Ọ nweghị òkè nke onye nbipute a".
Ị nwere ike iji ngwaọrụ a na ndabara, ma nwalee ọnọdụ mbipụta na-arụ ọrụ na windo a, nke ga-enye gị ohere iji nyochaa arụmọrụ zuru oke nke mpempe akwụkwọ.
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa na njedebe. Anyị gbalịrị ịkọwa n'ụzọ ọ bụla dị mfe ntinye faịlụ maka HP LaserJet 3055 MFP. Anyị nwere olileanya na ị jisiri ike ịhọrọ usoro kachasị adaba maka onwe gị na usoro dum ahụ nwere ọganihu.